Ubuntu 21.10 “Impish Indri” na -eji mmelite, onye nrụnye ọhụụ na ihe ndị ọzọ | Site na Linux
Newdị ọhụrụ nke Ubuntu 21.10 “Impish Indri” ahapụlarị mgbe ọtụtụ ọnwa nke mmepe na ụbọchị ole na ole nke friza nke jere maka ule ikpeazụ na mgbazi nke njehie.
Na ụdị ọhụrụ a nke nkesa gbanwere na iji GTK4 na desktọọpụ GNOME 40, nke e meworo ka interface ahụ ka ọ dị ọhụrụ. Nhazi ihe ndị a na -ahazi desktọọpụ mebere na nhazi ihu ala a na -egosikwa ha site na aka ekpe gaa n'aka nri.
Na tebụl ọ bụla egosiri na ọnọdụ nlele na -egosi windo dị, na -agagharị ma na -agbago n'ike n'ike site na mmekọrịta onye ọrụ. Ọ na -enye mgbanwe enweghị nkwekọrịta n'etiti ndepụta mmemme na desktọpụ ndị mebere. Nhazi ọrụ ka mma na ọtụtụ ndị nleba anya. GNOME Shell na -enye GPU maka ịsacha ihe mkpuchi.
Mgbanwe ọzọ bụ ụdị Yaru ọhụrụ zuru oke nke ejiri na Ubuntu, yana nke a na -enyekwa nhọrọ gbara ọchịchịrị kpamkpam (nkụnye eji isi mee, ọchịchịrị, na njikwa ọchịchịrị). Nkwado maka isiokwu agbakwunyere ochie (isi okwu gbara ọchịchịrị, okirikiri ọkụ, yana njikwa ọkụ) Akwụsịla ya n'ihi enweghị ike GTK4 iji kọwaa okirikiri dị iche iche na agba ederede maka aha na windo isi, nke anaghị ekwe nkwa na ngwa GTK niile ga -arụ ọrụ nke ọma mgbe ị na -eji isiokwu jikọtara.
Na akụkụ nwụnye, anyị nwere ike ịhụ faịlụ onye nrụnye ọhụrụ maka Desktọpụ Ubuntu nke atụpụtara ka etinyere n'ụdị ngwa mgbakwunye n'elu Curtin onye nrụnye ọkwa dị ala., nke ejirila na nrụnye Subiquity ndabara na Ubuntu Server. Edere ihe nrụnye ọhụrụ maka Desktọpụ Ubuntu na Dart ma jiri usoro Flutter wuo interface onye ọrụ.
Ihe ntinye ohuru Ejila desktọọpụ Ubuntu ọgbara ọhụrụ chepụta ya ma mepụta ya iji nye usoro nrụnye na -agbanwe agbanwe gafee ahịrị ngwaahịa Ubuntu niile. A na -enye ụdịdị atọ: "nrụzi nrụzi" iji degharịa ngwugwu niile dị na sistemụ na -agbanweghị nhazi ahụ, "Gbalịa Ubuntu" ka ị mara onwe gị na ngwa nkesa Live mode, yana "Wụnye Ubuntu" iji wụnye ngwa nkesa na diski. .
Ihe omuma ohuru nke puru iche bu na Enyere ikike iji nnọkọ desktọpụ dabere na protocol Wayland gburugburu na ndị njikwa NVIDIA.
Mgbe maka akụkụ ụda na PulseAudio nkwado nke Bluetooth agbasawanye nke ukwuu, ebe ọ bụ na n'ụdị ọhụrụ a agbakwunyere A2DP LDAC na AptX codecs, nkwado agbakwunyere maka profaịlụ HFP (Aka-efu Profaịlụ), nke mere ka o kwe omume ịkwalite ogo ụda.
Ọzọkwa enwere mgbanwe na njikwa ngwugwu, nke ọma mere mgbanwe ụfọdụ n'iji zstd algorithm na mkpakọ ngwugwu deb, nke ga -eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ ọsọ nke nrụnye ngwugwu, na ọnụ ahịa ntakịrị mmụba na nha ya (~ 6%). Nkwado maka iji zstd anọwo na apt na dpkg kemgbe Ubuntu 18.04, mana ejighi ya iji mpịakọta ngwugwu.
Nke mgbanwe ndị ọzọ pụtara na ụdị ọhụrụ a:
Site na ndabara, a na-enyere nzacha nftables packet: Iji jigide ndakọrịta azụ, ngwugwu iptables-nft dị, nke na-enye ngwa ọrụ yana otu ahịrị ahịrị iwu dị ka iptables, mana na-atụgharị iwu na-esite na ya n'ime koodu nke bytes nf_tables.
Ejila Linux kernel 5.13
Mmemme mmemme emelitere, gụnyere PulseAudio 15.0, BlueZ 5.60, NetworkManager 1.32.10, LibreOffice 7.2.1, Firefox 92, na Thunderbird 91.1.1.
Ihe nchọgharị Firefox emebiela na nnyefe ngwugwu ozugbo, yana ndị ọrụ Mozilla (a na -echekwa ikike ịwụnye ngwugwu ụgwọ, mana ugbu a bụ nhọrọ).
Budata Ubuntu 21.10 "Impish Indri"
Maka ndị nwere mmasị inwe ike nweta ụdị sistemụ a, ha nwere ike nweta onyonyo ISO site na njikọ dị n'okpuru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ubuntu 21.10 “Impish Indri” na -eji mmelite, onye nrụnye ọhụụ na ihe ndị ọzọ
Vanessa Denisse Dominguez dijo
Nnọọ. Enwere m ajụjụ, n'etiti nkesa ndị ọzọ nke Linux nwere, enwere ike iwere nke a dị ka oge kachasị mma ma ọ bụ ọ nwere ihe ọzọ karịrị ya?
Zaghachi Vanessa Denisse Domínguez Domínguez
Nnọọ. Enwere m ajụjụ, n'etiti nkesa nke Linux nwere, enwere ike ịtụle nke a dị ka oge kachasị mma ma ọ bụ enwere ọzọ karịa ya?
Linux Foundation ga -enweta ego nde $ 10 site na OpenSSF iji kwalite nchekwa mepere emepe